Seddex Ruux oo Soomali Ah oo ku Geeriyooday Duqeyntii Dimishiq
Wadanka Suriya ayaa waxaa shalay ka dhacay duqeymo qaas ahaan duleedka caasimada Dimishq iyadoo 3 ruux oo Soomaali ah ey ku geeriyoodeen duqeymahaas cirka ah.
Muwaadiniinta Soomaalida ee geeriyootay ayaa waxey ku noolaayeen dalka Suriya qaas ahaan dimishq marka ey doqeynta dhaceesay waxey ku jireen meel maqaaxi ah oo shaax laga cabo.
Dalka Suuriya ayaa mudooyinkii danbe waxaa ka socday duqeymo ee geesanayaan diyaaradaha cirka ey leedahay dowlada Suuriya iyadoo Madaxweyne Bishaar Al Asad uu ku baaqay in dagaalka la wado ilaa inta ey mucaaradka Suriya ey dagaalka joo jiyaan.
Dadka Soomalida ayaa waxey aad ugu badanyihiin wadanka Suuriya iyagoo jecel in ey ooga talaabaan xadka uu la wadaayo dalka Turikiga Soomaali badan ayaa ku nool dalka suuriya balse lama oga in ey dib ooga soo bixi doonaan maadama dagaalka uu markii hore ku ekaay gobolada dalka balse uu hada caasimada Dimishq uu soo gaaray.
Muwaadin Soomaali ah oo ku sugan waqooyiga magaalada Dmishiq oo aan xiriir qadka teleefanka la sameynay ayaa inoo sheegay in Soomaali badan ey iskaga baxeen dalka Suuriya iyagoo ka baqanay indagaalka ey sameen ka soo gaaro.